प्रकाण्डलाई थप तीन दिन थुनामै राख्न म्याद, त्यसपछि कहाँ लगिन्छ ? - प्रकाण्डलाई थप तीन दिन थुनामै राख्न म्याद, त्यसपछि कहाँ लगिन्छ ?
काठमाडौंको ढुङ्गाअड्डामा मुक्तिनाथ विकास बैंकको नयाँ शाखा | काठमाडौं उपत्यकासहित देशका केही भागमा बर्षा ! | तेक्वान्दो खेलाडीलाई सिटी एक्सप्रेसको ट्रयाक सुट ! | धर्म निरपेक्षता लेखेको ब्यानर जलाउने कार्यक्रममा प्रहरी हस्तक्षेप | शनिबार विवेकशिलको खबरदारी कार्यक्रम सातै प्रदेशमा
प्रकाण्डलाई थप तीन दिन थुनामै राख्न म्याद, त्यसपछि कहाँ लगिन्छ ?
२०७५, १३ भदौ, 06:03:24 PM
काठमाडौँ । नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’लाई थप दिन दिन नुवाकोटमै राखिने भएको छ । एक्स्काभेटर जलाएको आरोपमा काठमाडौंबाट पक्राउ गरी नुवाकोट लगिएका प्रकाण्डलाई जिल्ला अदालतले तीन दिन हिरासतमा राख्न म्याद थप गरेको छ ।
यसअघि उनलाई दुई पटक गरेर तीन दिनको म्यान थप गरिएको थियो । यसपटक गरी तेश्रोपटक म्याद थप गरिएको हो । गएको साउन ७ गते राति बेलकोटगढी नगरपालिका वडा नं. ९ नलगाउँमा सडक निर्माण गर्दै गरेको ठेकेदारको दुई थान एक्स्काभेटर जलाएको आरोपमा प्रकाण्डलाई पक्राउ गरिएको हो ।
यसअघि उनलाई काभ्रेमा पनि स्काभेटर जलाएको आरोपमा पक्राउ गरिएको थियो । त्यसअघि जबर्जस्ती चन्दा असुलेको आरोपमा प्रकाण्ड पक्राउ परेका थिए ।
अब कहाँ लगिन्छ ?
प्रकाण्डलाई बिना कारण थुनामा राखेको भन्दै सर्वोच्चले दुई पटक छाड्न आदेश दिइसकेको छ । तर प्रहरीले अर्को आरोपमा दुबैपटक सर्वोच्चबाटै पक्राउ गरेको छ ।
उनले नुवाकोटबाट पनि सर्वोच्चमा प्रत्यक्षीबन्दीको रिट हालेका छन । जसमा सर्वोच्चले फेरी उनलाई छाड्न आदेश दिनेछ । अब उनलाई कहाँ लगिनेछ त ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विप्लवले अराजक र आतंक फैलाउने काम गरेकाले उनका मुख्य सहयोगी प्रकाण्डलाई पक्राउ गरिएको भनिसकेका छन । र प्रकाण्डलाई सित्तिमिती छाड्ने मुड सरकारसँग छैन ।
अबको सुनुवाईमा सर्वोच्चले छाड्न आदेश दिएमा गत मंसिरमा भएको चुनावमा रामशरण महत चढेको गाडीमा बम विष्फोट गराएको आरोपमा प्रहरीले फेरी प्रकाण्डलाई पक्राउ गर्न सक्छ ।
यस्तै उनलाई भोजपुर र उदयपुरमा पनि बम विष्फोट गराएको आरोपमा पक्राउ गर्ने सम्भावना छ । यस्तै जुम्ला, रोल्पा र जाजरकोटमा पनि उनलाई पक्राउ गर्ने खालका मुद्धा छन ।
चुनावकै बेला जनाद्र्धन शर्मा, बर्षमान पुन लगायतका नेतालाई लक्षित गरी बम विष्फोट गराएको आरोप विप्लव र प्रकाण्डमाथि छ । प्रकाण्डसँगै विप्लवका झण्डै १५ जना नेताहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ । तर विप्लव भने पक्राउ परेका छैनन ।
काठमाडौं उपत्यकासहित देशका केही भागमा बर्षा !
तेक्वान्दो खेलाडीलाई सिटी एक्सप्रेसको ट्रयाक सुट !
जेट एयरवेजका उडान स्थगित, नेपालबाट दिल्ली हवाई भाडा झण्डै तीनगुणा महङ्गो !
धर्म निरपेक्षता लेखेको ब्यानर जलाउने कार्यक्रममा प्रहरी हस्तक्षेप
बैंकले उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ : अर्थमन्त्री खतिवडा